02/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Sendikan’ny mpampianatra : Hiverina hampianatra
Araka ny fanambaran’ny sendikan’ny mpampianatra mivondrona ao amin’ny Sempama Nosy, ny zoma lasa teo, tao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, izay nahitana ny solontenan’ny mpampianatra, Chef zap, talen-tsekoly, « conseiller pédagogique » avy amin’ny faritra 22 dia …Tohiny
Fandraisana an-tanana ireo ankizy sahirana : Hisy ny didy havoaka
Raha ny zava-nisy hatramin’izay, dia samy nanana ny fomba fandraisana an-tanana ireo zaza sahirana ireo ivon-toerana eto Madagasikara. Manoloana izay indrindra, dia nametraka ny fanjakana fa tokony hisy ny fitsipika ambany indrindra (norme minimale) tokony …Tohiny
Rafaramalala Heriniaina Eulalie : Izy no nanavotra ilay zazavavy kely 10 volana
Taorian’ny antso maro nataon’ny rehetra, dia hita ny renin’ilay zazavavikely 10 volana isan’ireo niharan-doza tao amin’ilay Car an-dalana tra-doza tetsy amin’ny tetezan’i Iombifotsy omaly iny. Faly izy rehefa nahita ny zanany velona soa aman-tsara. Vehivavy …Tohiny
Ambohidratrimo : Lehilahy hita faty tanaty ala
Raim-pianakaviana iray manodididina ny efapolo taona no hita faty tanaty kirihitr’ala. Araka ny filazan’ireo nanatri-maso ny zava-nitranga moa dia nilaza fa nifatotra tamin’ny hazo ity rangahy lehibe ity izao nisy nahita izao. Raha ny tatitra …Tohiny